ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အကြောင်းရင်းသုံးခုမှာပလာစမာဂလူးကို့စစမ်းသပ်မှု>7mmol / L-Diabetes Talks-Sinocare
အစာရှောင်ခြင်း Plasma Plasma Glucose Test> ၇ မီလီမီတာ / L ပမာဏ
အချိန်: 2020-04-16 Hits: 229
မြင့်အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စ hypoglycemics ၏ဆေးထိုးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရုံရိုးရှင်းစွာကုသမရနိုင်အဖြစ်။ အကြောင်းပြချက်များမတွေ့ရှိမီ, အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စ၏မြင့်မားသောအဆင့်တူအဘို့အလုံးဝကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စ်သည်အစာရှောင်ပြီးနောက် ၈ မှ ၁၂ နာရီတိုင်းတာသည့်သွေးပမာဏကိုဆိုလိုသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်အစားအစာကိုမျှမသောက်နိုင်သော်လည်းရေကိုသောက်နိုင်သည်) ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စသည်7mmol / L ထက်ကျော်လွန်ပါက၊https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_sugar_level
ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စ်အကြောင်းရင်းကို ဦး စွာတွေ့ရှိသင့်သည်။
အစာအလွန်အကျွံစားသုံးသော်လည်းအစားအစာစားပြီးနောက်လေ့ကျင့်ခန်းမပါဘဲအစားအစာမှသွေးထဲသို့ထုတ်လွှတ်လိုက်သောသကြားပမာဏတိုးပွားစေရန်ညအချိန်တွင်စားသုံးမှုနည်းသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အစာရှောင်ခြင်းမြင့်မားသောပလာစမာဂလူးကို့စလည်းနောက်ပိုင်းတွင်ညစာစားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။
မြင့်မားသောအစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စသည်မကြာခဏကြိမ်ဖန်များစွာဖြစ်ပွားပါက၎င်းသည်သိပ်အရေးမကြီးပါ။ အစားအစာကိုထိန်းချုပ်။ အစားအစာပြီးနောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သာ hyperglycemia တိုးတက်နိုင်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စသည်မကြာခဏဖြစ်ပွားပါကအောက်ပါအချက်နှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားသင့်သည်။
2. Diabetes mellitus အရုဏ် ဦး ဖြစ်ရပ် - ညဘက်မှာသွေးဂလူးကို့စ်ပမာဏနည်းနေတယ်၊
သွေးသည်ဂလူးကို့စ်အားအစားအစာမှထုတ်လွှတ်လိုက်သောစွမ်းအင်ဖြင့်ချိန်ညှိရုံသာမကဘဲ (glucocorticoid နှင့်ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းနှင့်စသည်တို့အပါအဝင်) သွေး၏ဂလူးကို့စ်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည့်ဟော်မုန်းအမျိုးမျိုးမှထိန်းချုပ်သည်။
အရုဏ်တက်ချိန်တွင်ဤဟော်မုန်းများသည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်၊ ၎င်းသည်အသည်း / ကြွက်သားတွင်သိုလှောင်ထားသည့်ဂလိုင်ကိုဂျင်အပေါ်သက်ရောက်ပြီးသွေးလည်ပတ်မှုသို့ရောက်ရှိစေသည် ထိုအခါအသှေးကိုဂလူးကို့စအဆင့်ကိုအညီထ။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတွင်အရုဏ်တက်ချိန်၌သွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ပမာဏမြင့်တက်ခြင်းကိုဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဖြစ်ခေါ်ဆိုသည်။ hyperglycemic hormones များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သွေး၏ဂလူးကို့စ်အဆင့်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်, အစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စယခင်ညဥ့်အခါ predormital သွေးဂလူးကို့စထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်နိုင်သည်။
ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲ သွေးသည်ဂလူးကို့စ်သည်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးညမှာဖြစ်ပျက်သောအရာသည်ညအချိန်တွင်မဖြစ်ပေါ်ပါ။ သို့သော်နံနက်အချိန်၌သွေးသည်ဂလူးကို့စ်မြင့်တက်လာပြီးနံနက်စာမစားမှီအစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စ်မြင့်တက်သောအခါဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရိပ်အမြွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ဘယ်လိုကုသမလဲ သာမန်အစားအစာကုထုံးတွင်ဇွဲရှိခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ထမင်းစားချိန်ကိုစနစ်တကျတိုးမြှင့်နိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာတစ်နေ့လျှင် ၄ မှ ၅ အထိအစားအစာများ) ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ညအိပ်စက်ခြင်းမတိုင်မီတစ်နာရီခန့်အကြာတွင်ရေစာတစ်ခွက်မြှင့်သင့်သည်။ နို့တစ်ခွက်၊ ကွန်တိန်နာတလုံးသို့မဟုတ်ပေါင်မုန့်အတော်များများကဲ့သို့သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ပရိုတင်းပါဝင်သောအစားအစာအနည်းငယ်ကိုစားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းများဖြင့်ညအချိန်တွင်အင်ဆူလင်ဓာတ်၏အရည်နှင့်ပမာဏကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
(သို့) ဆရာ ၀ န်ကိုကုသမှုနည်းစနစ်ကိုပုံမှန်ညှိပြီး hypoglycemics ဆေးကိုတိုးမြှင့်ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
၃။ Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှု - ညဘက်မှာသွေးထဲမှာသကြားဓာတ်နည်းတယ်၊
ဆီးချိုရောဂါလူနာများတွင် hypoglycemia ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါက၎င်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်အကာအကွယ်ယန္တရားကိုစတင်သည်။ သွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဒုတိယအဆင့် hyperglycemia ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအားဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော hyperglycemic hormones ၏ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို Somogyi effect ဟုခေါ်သည်။
Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဆီးချိုရောဂါလူနာများတွင်သတိပေးခြင်းခံယူရန်၊ တခါတရံတုန်ခါခြင်းနှင့်အအေးမိခြင်းကဲ့သို့သော hypoglycemia ပုံမှန်လက္ခဏာများမပေါ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ hypoglycemic coma ဖြစ်ပေါ်မှုဟာအလွန်အန္တရာယ်များလာပါတယ်။
ညသန်းခေါင်အချိန်တွင် Hypoglycemia သည်အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုစတင်မည်ကိုခန့်မှန်းထားသည်။
ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲ အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်၊ နံနက် ၂း၀၀ မှ ၃း၀၀ နာရီအထိအခြေအနေကိုခွင့်ပြုပါကသွေးအတွင်းရှိဂလူးကို့စ်ကိုစစ်ဆေးသည်။
အကယ်၍ hypoglycemia ကို 0: 00 ~ 4: 00 (ဆိုလိုသည်မှာ .3.9 mmol / L) တွင်တိုင်းတာမှုဖြင့်ညွှန်ပြပါကနံနက်စာမစားမီအစာရှောင်ခြင်းပလာစမာဂလူးကို့စ်မြင့်တက်မှုကို Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြေရှင်းရန်မှာပုံမှန်အစားအသောက်များ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်းနှင့် hypoglycemics များကိုသင့်တော်သောပမာဏဖြင့်သောက်ခြင်းသည်၎င်းအတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
ကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်သော sulfonylureas ဆေးများ (ဥပမာ Gliclazide ရေရှည်တည်တံ့သောဆေးပြားများနှင့် Glimepiride တက်ဘလက်များ)၊ ရောနှောထားသောအင်ဆူလင်နှင့်အလယ်အလတ်သက်တမ်းသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောအင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက် Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
အစားအစာခွဲထုတ်ခြင်းသည် Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အလွန်မြင့်မားသော postprandial သွေးဂလူးကို့စ (> 10 mmol / L) နှင့်နိမ့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သွေးဂလူးကို့စနှင့်အတူဆီးချိုရောဂါလူနာများတွင်ညစာစား၏ 1/3 ညနေ 21: 30 ~ 22: 00 pm မှာယူနိုင်ပါတယ်
အကယ်၍ သန္ဓေသား၏ဂလူးကို့စ်သည် <6.5 mmol / L ဖြစ်ပါက snacking ကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဆိုဒါဘီစကွတ် ၄ ပုဒ်သို့မဟုတ်နို့တစ်ခွက် (၂၂၅ မီလီမီတာ) ကိုစနစ်တကျထည့်သွင်းထားသည်။ အိပ်စက်ခြင်းမတိုင်မီအစာစားပြီးနောက် hyperglycemia ဖြစ်ပွားခြင်းရှိ၊ hypoglycemia ဖြစ်ပွားမှုအပြီးတွင် ပိုမို၍ ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုသင်သိသင့်သည်။
မှတ်သားစရာမှာဤနည်းများသည်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုသို့မဟုတ် Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ယာယီကုသမှုနည်းလမ်းများသာဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့် အကယ်၍ hypoglycemics ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါကဆရာဝန်ကိုကုသမှုခံယူရန်အချိန်မီသင့်သည်။ အသင့်တော်ဆုံးကုသနည်းကိုဆရာဝန်များကရောဂါအခြေအနေမှန်အရရွေးချယ်လိမ့်မည်။
၁။ နောက်ဆုံးညတွင်အစာအလွန်အကျွံစားခြင်း။ ဖြေရှင်းနည်းများ - နည်းနည်းအစာစားပါ၊ သိုမဟုတ်အဆီနှင့်ပရိုတင်းများကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုစနစ်တကျလျှော့ချပါ။
၂ ။ ဖြေရှင်းချက် - အိပ်စက်ခြင်းစနစ်ထဲကိုဝင်ရန်ကြိုတင်အိပ်ရာဝင်ပါ။ မအိပ်ခင်ဖုန်းကိုမကြည့်ပါနဲ့။
3. ဆီးချိုရောဂါအရုဏ်ဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ဖြေရှင်းနည်းများ - တစ်နေ့စာအစားအစာများစားပါ၊ သို့သော်အစားအစာတစ်ခုစီတွင်အစာအနည်းငယ်သာစားပါ။ သို့မဟုတ်ဆရာဝန်များ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းမပြုမီပေးထားသော hypoglycemics ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပါ။
4. Somogyi အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဖြေရှင်းချက် - အကယ်၍ မသေဆုံးမီဂလူးကို့စ်သည် <6.5 mmol / L ဖြစ်ပါကနို့တစ်ခွက်ကိုသောက်သင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ဘီစကွတ်မုန့်အနည်းငယ်ကိုသောက်သုံးသင့်သည်။